impompo yentsimbi engenamanzi
Impompo yeFroth ethe tyaba
Ipompo ye-TZSH ePhakamileyo ye-Chrome ye-alloy Slurry
TZX series High Head oluludaka Pump
Uhlobo lwe-UHB-ZK Impompi yodaka eXhwayo kuMdaka
Impompi ye-VS ethe nkqo ye-Sump Lurry
Polyurethane PU Slurry Pump iinxalenye
Impompi yokukhupha i-WN Slurry Dredging
impompo yodaka oluludaka olunxibe irabha enganxibi
TZSA series Compact Ludaka Pump
I-QJ Intsimbi engenamanzi impompo entywilayo emanzini (impompo yequla elinzulu) Ingcaciso yeMveliso
Impompo ephantsi kohlobo lwe-QJ yinjini kunye nempompo yamanzi ngokuthe ngqo emanzini kumsebenzi wezixhobo zokuphakamisa amanzi, ifanelekile ukutsalwa kwimithombo yamanzi aphantsi komhlaba ingasetyenziselwa imilambo, amadama, iidreyini kunye nezinye iiprojekthi zokuphakamisa amanzi: ubukhulu becala kunkcenkcesho lwefama kunye nentaba yethafa Yamanzi abantu nezilwanyana, kodwa nakwizixeko, iifektri, oololiwe, imigodi, indawo yokusetyenziswa kwamanzi.
QJ Intsimbi engatyiwayo yempompo ekwaziyo ukuntywila emanzini (impompo yequla elinzulu) iimpawu
1. Injini, impompo yamanzi enye, chwechwela emanzini ukubaleka, ikhuselekile kwaye ithembekile.
2. Akukho mfuneko ikhethekileyo kumbhobho womthombo kunye nombhobho wamanzi (oko kukuthi, umbhobho wentsimbi, umbhobho wothuthu, umhlaba omanzi njalo njalo unokusetyenziswa; phantsi kwemvume yoxinzelelo, umbhobho wentsimbi, umbhobho; umbhobho weplastiki njalo njalo unokusebenza njengombhobho wamanzi).
3. Ufakelo, ukusetyenziswa, ukugcinwa lula Ulula, unyawo oluncinci, akukho mfuneko yokwakha igumbi lokupompoza.
4. Isakhiwo esilula, ukugcina izinto eziluhlaza.
Ukusetyenziswa kwempompo ye-submarine yeemeko zifanelekile, ulawulo olufanelekileyo kunye nobomi bobudlelwane obuthe ngqo.
QJ Intsimbi engatyiwayo impompo entywilayo emanzini (impompo yequla elinzulu) ciimeko zokusetyenziswa
QJ-uhlobo iimpompo ezingaphantsi kwamanzi zingasetyenziswa ngokuqhubekayo phantsi kwezi meko zilandelayo:
1. Unikezelo lwamandla e-AC amanqanaba amathathu kunye ne-frequency elinganisiweyo ye-50HZ kunye nombane olinganisiweyo we-380 ± 5% V.
2. I-inlet yempompo kufuneka ibe ngaphantsi kweemitha ezi-1 ngaphantsi kwinqanaba lamanzi ahambayo, kodwa ubunzulu be-dive akufanele budlule i-70 yeemitha ngaphantsi kwinqanaba le-hydrostatic. Isiphelo esisezantsi senjini ubuncinane yimitha e-1 ngaphezu kobunzulu bamanzi asezantsi.
3. Ubushushu bamanzi alikho ngaphezulu kwe-20 ℃.
4. Iimfuno zomgangatho wamanzi: (1) umthamo wamanzi wamanzi awukho ngaphezulu kwe-0.01% (umlinganiselo wobunzima);
(2) ixabiso le-PH kuluhlu lwe-6.5 ~ 8.5;
(3) isiqulatho sekloridi esingekho ngaphezulu kwe-400 mg / l.
5. Ifuna ixabiso elihle, udonga lugudile, akukho luhamba kakuhle.
I-QJ Intsimbi engatyiwayo impompo entywilayo emanzini (impompo yequla elinzulu) inkcazo yesakhiwo
I-1.QJ-uhlobo lwe-submersible unit unit luquka: impompo yamanzi, i-motor submersible (kubandakanywa nekhebula), imibhobho yamanzi kunye nokutshintsha kokulawula okwenziwe ngamacandelo amane.
Impompo engaphantsi kwamanzi yempompo ye-centrifugal enenqanaba elinye lokufunxa: i-motor ephantsi kwamanzi emanzi avaliweyo azaliswe ngamanzi, amanqanaba amathathu ami nkqo kwikheji ye-asynchronous motor, i-motor kunye nempompo ngokusebenzisa uzipho okanye igubu elinye elidibanisa ngqo; ixhotyiswe ngeenkcukacha ezahlukeneyo zeentambo ezintathu zeCore; ukuqala izixhobo kumanqanaba ahlukeneyo umthamo wokutshintsha umoya kunye self-decompression starter, umbhobho wamanzi ububanzi ezahlukeneyo umbhobho yentsimbi eyenziwe uqhagamshelo flange, impompo eliphezulu-lift kunye nolawulo isango.
2. Impompo engaphantsi kwamanzi Inqanaba ngalinye le-baffle lifakwe i-rubber bear; i-impeller igxininiswe kwi-shaft yepompo kunye nomkhono we-tapered; i-baffle ifakwe intambo okanye ibhoti.
3. Ipompo ye-submersible ephakanyisiweyo ephezulu kunye ne-valve yokutshekisha kwindawo ephezulu, ukuphepha ixesha lokunciphisa elibangelwa ngumonakalo kwiyunithi.
4. I-submarine motor shaft enesanti ye-labyrinth kunye ne-asembly ezimbini eziguqukayo ze-oyile ye-skeleton, ukuthintela ukuhamba kwesanti kwi-motor.
5. I-motor submersible kunye neebheringi ze-lubricated zamanzi, inxalenye engezantsi yefilimu yokulawula uxinzelelo lwerubha, intwasahlobo elawula uxinzelelo, ehlanganiswe negumbi lokunyuka, ukulungelelanisa uxinzelelo olubangelwa utshintsho lweqondo lokushisa; i-motor winding nge-polyethylene insulation, ibhatyi ye-nayiloni ehlala ixesha elide lempahla yabathengi, uqhagamshelwano lwekhebula nge-QJ-uhlobo lwe-cable ye-teknoloji yesixhumi se-cable, i-connector insulation off scraping paint layer, yadityaniswa, i-welding ngokuqinileyo, kunye nerabha ekrwada ejikeleze umaleko. Kwaye emva koko isongwe nge-tape yokubambelela enganyangekiyo yamanzi i-2 ukuya kwi-3 imigangatho, ngaphandle kwepakethe kwi-2 ukuya kwi-3 ye-tape engangeni manzi okanye i-glue kunye ne-tape ye-rubber (ibhanti yebhayisikili) ukukhusela amanzi.
6. I-motor ivalwe, itywinwe nge-precision stop bolt kunye ne-cable outlet.
7. Isiphelo esiphezulu se-motor sinomngxuma wokutofa kwamanzi, kukho umngxuma wokukhupha umoya, inxalenye engezantsi yomngxuma wamanzi.
8. Indawo engezantsi yenjini enomgangatho ongaphezulu nasezantsi wethrust, i-thrust ethwele i-thrust kwi-groove ukupholisa, kwaye kukugaya i-stainless steel thrust plate, kunye nempompo phezulu kunye ne-axial force.
I-QJ Intsimbi engenamanzi impompo entywilayo emanzini (impompo yequla elinzulu) umgaqo wokusebenza
Ngaphambi kokuvula umpompo, umbhobho wokufunxa kunye nempompo kufuneka uzaliswe ngolwelo. Emva kokuba ipompo iphonswe, i-impeller ijikeleza ngesantya esiphezulu, kwaye i-liquid ijikeleza nge-blade. Ngaphantsi kwesenzo samandla e-centrifugal, ishiya i-impeller yangaphandle kwaye ulwelo luyancipha ngokuthe ngcembe kwaye uxinzelelo lwanda ngokuthe ngcembe ukusuka kwimpompo yokuThumela ngaphandle, ukuphuma kombhobho wokukhupha. Kweli nqanaba, embindini wencakuba embindini wolwelo uphoswa kwindawo engqongileyo kunye nokwakheka kokubini akukho moya kwaye akukho vacuum elulwelo indawo yoxinzelelo oluphantsi, ichibi lolwelo kwidama loxinzelelo lomoya phantsi kwesenzo sokufunxa. Umbhobho kwimpompo, ulwelo luqhubekile Lufunxwa rhoqo ukusuka echibini lolwelo kwaye ngokuqhubekayo luqukuqela luphuma kumbhobho wokukhupha.
QJ Intsimbi engatyiwayo impompo entywilayo emanzini (impompo yequla elinzulu) use kunye neempawu
I-QJ-type submersible pump isekelwe kwimigangatho yelizwe eyenzelwe iimveliso zokulondoloza amandla, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokunkcenkceshela, amashishini amashishini kunye nemigodi yokubonelela ngamanzi kunye nokukhupha amanzi, i-plateau, abantu beentaba, amanzi emfuyo.
Impompo ibandakanya impompo entywilayo ye-QJ kunye ne-YQS yemoto entywilayo emanzini enye phantsi kwamanzi ukuze isebenze phantsi kwamanzi. Ngesakhiwo esilula, ubungakanani obuncinci, ubunzima bokukhanya, ukufakela, ukugcinwa lula, ukusebenza ngokukhuselekileyo, ukuthembeka, amandla asebenzayo kunye nokunye.
Uluhlu lwe-QJR lwamaqula anempompo ekwazi ukumelana nobushushu, ilungile kunye nenqanaba lesithathu le-asynchronous motor ekwazi ukumelana nobushushu ukuya kwelinye, idityaniswe kwimpompo ekwazi ukumelana nobushushu, ubushushu bamanzi ashushu ukuya kuthi ga kwi-100 ° C, intywiliselwe equleni. , Amanzi sisixhobo esisebenzayo; I-geothermal yenye yexabiso eliphantsi, elicocekileyo, elingenakuphela lamandla langoku, ngoku lisetyenziswa ngokubanzi ekufudumezeni, ezonyango, ekuhlambeni, ekuzaleni, ukutyala, kwimizi-mveliso kunye nezolimo, iifektri kunye nemigodi, iinkonzo zokuzonwabisa, izibonelelo zempilo, inkalo. Ineenzuzo zokusebenza okulula, ukusebenza okuthembekileyo, akukho ngxolo, ukusebenza kakuhle, ukusebenza kakuhle kweyunithi, ukufakwa lula kunye nokugcinwa. Ineengenelo ezininzi ezifana nokumelana nobushushu, ukumelana nokugqwala kunye nokuchasana nokuguga. Yeyona mveliso yamvanje yamanzi ashushu e-embankment.
1. Ukusetyenziswa ngokuthe nkqo, njengakwiqula eliqhelekileyo;
2. Ukusetyenziswa kwe-oblique, njengasemgodini onendlela ethambekileyo;
3. Ukusetyenziswa okuthe tye, njengasequleni
I-QJ Impompo yombane engaphantsi kwamanzi yequla (impompo yequla elinzulu) Imiqathango
1. Iimpompo eziphantsi kwamanzi kufuneka zisetyenziswe kumxholo wesanti ongaphantsi kwe-0.01% yomthombo wamanzi, igumbi lokumpompa lixhotyiswe ngetanki yangaphambi kwamanzi, umthamo kufuneka uhlangabezane nokuqala kwamanzi aqhutywe ngaphambili.
2. Umpompo omtsha okanye ogqityiweyo onzulu wempompo, kufuneka ulungelelanise igobolondo lempompo kunye ne-impeller clearance, i-impeller ekusebenzeni ayiyi kungqubuzana negobolondo.
3. Impompo yequla elinzulu kufuneka isebenze phambi kokuba amanzi angene eshafini kwaye ithwele iqokobhe ukulungiselela ukubaleka kwangaphambili.
4. Ngaphambi kokuqala kwempompo yequla elinzulu, izinto zokuhlola kufuneka zihlangabezane nezi mfuno zilandelayo:
1) iibholiti zesiseko ziqinisiwe;
2) imvume ye-axial ukuhlangabezana neemfuno, ulungelelanisa amantongomane e-bolt afakwe;
3) i-gland yokupakisha iqinisiwe kwaye ifakwe i-lubricated;
4) iibheringi zeemoto ziye zathanjiswa;
5) Jikelezisa i-motor rotor kunye nokuyeka indlela ngesandla ziguquguqukayo kwaye ziyasebenza.
5. Impompo yequla elinzulu ayinakusebenza kwimeko yamanzi. Iimpompo I-impeller enye okanye ezimbini kufuneka zintywiliselwe ngaphantsi komgangatho wamanzi we-1m. Ukusebenza kufuneka kuhlale kujonge utshintsho kwinqanaba lamanzi equleni.
6. Ngethuba lokusebenza, xa ufumana i-vibration enkulu ejikeleze isiseko, kufuneka uhlolisise i-pump bearing okanye i-motor filler wear; xa ukuguga okugqithisileyo kunye nokuvuza, kufuneka kuthathe indawo yamaqhekeza amatsha.
7. iye yafunxwa, yagalelwa ngempompo yequla elinzulu lodaka, phambi kokumisa impompo, ukusetyenziswa kwamanzi okuhlanjululwa.
8. Ngaphambi kokumisa ipompo, kufuneka uvale i-valve yamanzi, unqumle amandla, utshixe ibhokisi lokutshintsha. Xa ubusika bukhubazekile, amanzi kufuneka afakwe kwimpompo.
Ukuzihlangula: Ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda eboniswe kwi(i)mveliso ezidwelisiweyo yeyabantu besithathu. Ezi mveliso zinikezelwa kuphela njengemizekelo yezakhono zethu zokuvelisa, kwaye azithengiswa.
Ngaphambili: IiNkampani zePhumpu zeGravel ezigqwesileyo zaseTshayina-uhlobo lweSYB-udidi olomeleziweyo lwePump yeDisc ye-Self-primping-Boda
Okulandelayo: Ixabiso le-Antiabrasive Slurry
12v Impompo yamanzi
1hp Impompo yamanzi
2hp Impompo yamanzi
5hp Impompo yamanzi
Impompo yamanzi ezenzekelayo
Impompo yaManzi enebhetri
Impompo yamanzi apholileyo
Impompo yamanzi yeDc
Impompo yamanzi yeNdlela eNzulu
Impompo yamanzi edizili
Impompo yamanzi amdaka
Impompo yamanzi yokufunxa kabini
Impompo yamanzi yoMbane
Impompo yamanzi yaseGadini
Impompo yaManzi eneGesi
Impompo yamanzi egesi
Impompo yamanzi yesandla
Impompo yamanzi yoxinzelelo oluphezulu
Impompo yokujikeleza kwamanzi ashushu
Impompo yamanzi ashushu
Impompo ejikelezayo yamanzi ashushu
Amanzi ashushu Recirculating System
Impompo yaManzi eyenziwe ngesandla
Impompo yamanzi yesinyithi
Impompo yamanzi ye-Multistage
Impompo yamanzi epetroli
Umbhobho weMpompo yamanzi
Impompo yaManzi ephathwayo
Impompo yamanzi ye-Rv
Impompo yaManzi yokuZithulula
Impompo yaManzi eneSola
Impompo yoMthombo waManzi eSolar
Impompo yamanzi eSola
Impompo yamanzi angaphantsi kwamanzi
Impompo yokukhuthaza amanzi
Impompo yophawu lwamanzi
Impompo yomthombo wamanzi
Impompo yeJet yamanzi
Impompo yeSump esebenza ngamanzi
I-Booster yoxinzelelo lwamanzi
Impompo yokunyusa uxinzelelo lwamanzi
ITanki yoxinzelelo lwamanzi
Impompo yamanzi Aquarium
Impompo Yamanzi Yendlu
Umatshini wokumpompa amanzi
Impompo yerabha yaManzi Cap
Itywina lerabha yempompo yamanzi
Impompo yokufunxa amanzi
Itanki Yamanzi Nempompo
Impompo yoThutho lwaManzi
Impompo Yamanzi Yamanzi
Iinxalenye zempompo eziludaka oluludaka lwe-Slurry Pump Impeller
Impompo yogutyulo lwePWL
Iinxalenye zePump eziLudaka
I-SFX-Type eyomeleziweyo yokuSelf-Priming